Ungayifumana njani i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Indlela yokwazi ukuba luthando okanye ubuhlobo. Kuyinto eqhelekileyo ukuziva sididekile xa sikuloo "ndawo yomhlobo" edumileyo. Uyazibuza: Wazi njani ukuba bubuhlobo nje okanye enye into? Ngaba uyafuna ukwazi ukuba ngokwenene ukwindawo yomhlobo okanye ukuba umntu omkhathaleleyo naye ufumana amabhabhathane esiswini xa ejonge kuwe? Kuba… ufunde kabanzi
Indlela yokulibala ukuba ngubani omthandayo. Sonke siye sathandana ngaxa lithile ebomini bethu. Izigigaba, ukuhleka, isidlo sangokuhlwa, umsindo,… Ukuphila amaxesha akhethekileyo nomnye umntu kwaye ungafuni ukuba iphele, kodwa ngelishwa oku akusoloko kunjalo. Nangona kuya kuba kuhle ukufumana umntu ofezekileyo ebomini, akusoloko kufezekiswa. … ufunde kabanzi
Indlela yokwenza umfazi athandane nawe. Kuthiwa imeko yokuthandana yenye yezona zihlandlo zolonwabo ebomini bethu. Ukuthandana nomntu obhinqileyo kunzima kakhulu, kwaye ukuze uyifezekise kufuneka ukhuphe zonke izixhobo zakho. Kodwa ungakwaliwa nguye, kwaye ukunqanda oku ukuba kungenzeki, sidale le… ufunde kabanzi
Indlela yokuba nobudlelwane ngakumbi kwaye uthandane nabantu. Ngokuchasene nenkolelo eqhelekileyo, akukho mntu unokuba mnandi okanye abe nentsingiselo ngamaxesha onke. Abanye abantu banokuba neentloni ngakumbi, bangeniswa kwaye bangakhuselekanga, kodwa bahlala benezimpendulo ezimnandi kunye nezilungileyo kubantu abathile okanye iimeko. Kuyenzeka kwakhona ukuba abantu abanomdla kunye nabadlamkileyo ... ufunde kabanzi
Indlela yokubuyisela ubuhlobo obuphukileyo. Abahlobo bafana nentsapho yethu. Sibaxelela iimfihlo zethu, basecaleni kwethu ngamaxesha amnandi namabi, kwaye babalulekile kubomi bethu. Kodwa, ngamaxesha athile, asivumelani kwaye kunokuvela ukungavisisani. Ukungavumelani ngomba kunye nokuxoxa ... ufunde kabanzi
Indlela yokuba krelekrele. Ubulumko bunamandla engqondo esivumela ukuba siziqhelanise neemeko ngendlela efanelekileyo. Ukuze siyiqonde ngakumbi inyaniso, kuyimfuneko ukufunda nokuqiqa ukuze sikwazi ukwenza ezona zigqibo zilungileyo. Ngesi sizathu kubaluleke kakhulu ukuphuhlisa ubukrelekrele bethu. Ngaphandle... ufunde kabanzi
Indlela yokuba nomtsalane ngakumbi
Indlela yokuba nomtsalane ngakumbi. Uphando oluninzi lubonisa unxibelelwano phakathi kobuhle kunye nelungelo. Umntu "omhle ngokwentelekiso" udla ngokufumana iingenelo kunomntu "ombi ngokwentelekiso", kwaye oku kungangqinelani kudala ukhuphiswano malunga nokuba ngubani omhle ngakumbi, onomtsalane ngakumbi, okrelekrele ngakumbi, owaziwayo okanye osempilweni. Kodwa sithathela ingqalelo yonke le nto kufuneka siphendule ... ufunde kabanzi
Indlela yokuphuhlisa charisma
Indlela yokuphuhlisa charisma. I-Charisma inokuchazwa njengamandla okutsala, ukudanisa kunye nokuphembelela abanye. Ngokuqhelekileyo, kulula ukubona xa umntu enomdla. Umntu onothando ulungile, kodwa uya phambili. Njengovelwano, ubunkokeli okanye ukuzingcungcuthekisa, i-charisma sisakhono sentlalo... ufunde kabanzi
Unokuba nemveliso kangakanani emsebenzini
Indlela yokuvelisa ngakumbi emsebenzini. Ngokusisiseko, ukuba nemveliso kukukwazi ukuvelisa ngakumbi ngezixhobo ezimbalwa kangangoko kunokwenzeka. Umzekelo, umatshini ovelisa iibhotile ezili-10 ngeyure unemveliso ngakumbi kunomnye ovelisa inani elifanayo leebhotile kodwa usebenzise kabini ixesha. Ingcali elungileyo kufuneka isoloko ijonge iindlela ezintsha... ufunde kabanzi
Indlela yokulawula ukuxhalaba ngokwemvelo
Indlela yokulawula ukuxhalaba ngokwemvelo. Ukuxhalaba yimeko yendalo yoloyiko esiye sabandezeleka ngayo sonke ngaxa lithile. Nangona kunjalo, kuxhomekeke kwindima eyidlalayo ebomini bethu, inokuba yimvakalelo eqhelekileyo, isigulo, okanye ukuphazamiseka kwengqondo. Ngamanye amazwi, ngamanye amaxesha sonke siziva sinexhala, kuba... ufunde kabanzi
Yintoni umahluko phakathi komphefumlo nomoya
Yintoni umahluko phakathi komphefumlo nomoya. Abantu abaninzi bayasilela ukwahlula phakathi komphefumlo nomoya. Umphefumlo bubuntu bomntu ngamnye yaye umoya yinxalenye yomntu enxibelelene noThixo. Umphefumlo nomoya zidibene kwaye zombini kufuneka ziqondwe kunye. IBhayibhile iyala... ufunde kabanzi
Yintoni ulwimi lweeNgelosi zaseZulwini
Yintoni ulwimi lweeNgelosi zaseZulwini. Ulwimi lweengelosi lukhankanywa kube kanye kuphela eBhayibhileni. Sekunjalo, kwesi sicatshulwa kucaciswa ukuba uthando lubaluleke ngakumbi kunokuthetha iilwimi ezininzi ezaziwayo nezingaziwayo. Ulwimi lwezithunywa zezulu lumela iilwimi ezingaziwayo. “Ukuba ndithe ndathetha ngeelwimi zabantu, . . . ufunde kabanzi
Luthini ulandelelwano ngokulandelelana kweencwadi zeBhayibhile
Luthini ulandelelwano ngokulandelelana kweencwadi zeBhayibhile. Ukulandelelana kweencwadi zeBhayibhile ngumbandela ontsonkothileyo, ekubeni ingeyondlela ezihlelwa ngayo. Iincwadi zeBhayibhile zidityaniswe ngokweendidi zoncwadi (iincwadi zembali, imibongo, iziprofeto, iileta), kungekhona ngolandelelwano... ufunde kabanzi
Zithini izizwe ezilishumi elinambini zakwaSirayeli
Zithini izizwe ezilishumi elinambini zakwaSirayeli. Izizwe ezilishumi elinesibini zakwaSirayeli zithiywe ngoonyana abalishumi elinesibini bakaYakobi: uRubhen, uSimeyon, uLevi, uYuda, uDan, uNafetali, uGadi, uAshere, uIsakare, uZebhulon, uYosefu, noBhenjamin. Oonyana ababini bakaYosefu, uManase noEfrayim, nabo baba zizizwe zakwaSirayeli. Isizwe sakwaLevi asifumananga lifa... ufunde kabanzi
Yintoni abakhweli bamahashe abane beapocalypse
Yintoni abakhweli bamahashe abane beapocalypse. Abakhweli bamahashe abane beApocalypse bayinxalenye yesiprofeto samaxesha okuphela. Zimela iziganeko ekwaprofetwa ngazo eziya kwenzeka ngaphambi kokuphela kwehlabathi. Kukho iinguqulelo ezininzi ezahlukahlukeneyo zokuzaliseka kwesiprofeto sabakhweli bamahashe abane beApocalypse. Embonweni kaYohane, ochazwe kwiSityhilelo... ufunde kabanzi
Iphepha1 Iphepha2 ... Iphepha8 Elandelayo →